Ny Machining K-Tek Precision dia manome ny masinin-milina CNC Milling izay mahazaka fandeferana mafy. Izahay dia nandroso ny milina fikosoham-bary CNC avy amin'ny axis 3 amin'ny ankapobeny mankany amin'ny axis 5. Amin'ny maha ISO9001: 2015 sy TS 16949: 2009 ny orinasa mpamokatra faritra CNC voasoratra anarana, tsy vitan'ny hoe mifantoka amin'ny famokarana fa manome ihany koa ny ampahany tsara amin'ny milina CNC.
Na sarotra na lehibe toy inona ny vokatra, ny injenierantsika mahay dia afaka mamokatra azy ireo amin'ny fahamendrehana sy kalitao mitovy. Izay rehetra antenainao amin'ny milina CNC Milling farany dia azon'ny K-Tek Machining Co., Ltd.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny haitao farany CNC Milling Technology, mamokatra amin'ny alàlan'ny mandeha ho azy, ny fiovana dia azo ahena sy voafehy lavitra indrindra.
Inona no atao hoe CNC Milling?
Ny fikosoham-baravarankely dia iray amin'ireo dingana fanodinana fahita matetika hanalana fitaovana. Ilaina ny mpikapa rotary rehefa manala ilay fitaovana. Ny cutter dia fitaovana fanapahana misy nify maranitra mihodina amin'ny hafainganam-pandeha. Ho potika ny fitaovana rehefa manome sakafo ilay sangan'asa ao amin'ilay mpanapaka mihodina. Amin'ny ora fiasana dia azo alaina ny endrika tadiavina. Amin'ny ankapobeny ny milina fikosoham-bary dia manana mpiray telo: X, Y ary Z. Mba hamokarana ireo faritra sarotra, 5-axis, 6-axis no hampiasaina.
K-Tek Precision Machining dia orinasa matihanina manodina CNC. Manana ny milina fikosoham-bary isika avy amin'ny 3-axis ka hatramin'ny 5-axis. Ny injenierantsika matihanina dia afaka mahita vahaolana foana hamokarana ireo faritra matevina amin'ny kalitao avo lenta.
• endrika: Toy ny zavatra takian'ny mpanjifa
• haben'ny ampahany: 0,5-1300mm
• Fitaovana: varahina, aliminioma, vy firaka, vy tsy miova sns.
• Fandeferana: +/- 0.005mm
• Azo haingo amin'ny alàlan'ny fanaovana sary na santionany
• Vondrona kely sy lehibe